I-Apple inyusa i-7 yezigidigidi kwintengiso yebhonasi ngaphambi komgaqo osondeleyo kaTrump | Ndisuka mac
I-Apple inyusa i-7 yezigidigidi kwintengiso yebhonasi ngaphambi komgaqo osondeleyo kaTrump
Ubongameli bukaTrump kwiinyanga ezimbalwa eUnited States yinto ekufuneka ijongane nayo neenkampani eziphambili zaseMntla Melika. Kwaye nditsho ukuba sisebenze kuba oko wangena emandleni, Imigaqo-nkqubo kaTrump khange ilincede ngokupheleleyo icandelo elibaluleke kwilizwe njengecandelo lobuchwephesheZombini ngenxa yokubathintela abafuduki, umqhubi ophambili wolu hlobo lweshishini, nangenxa yemigaqo-nkqubo yokuvelisa kwilizwe laseMelika uqobo.
Ngoko ke, U-Apple uthathe ithuba lokuhlangula isavenge setyala esisekwe malunga ne- $ 7 yezigidigidiNgaphandle kweengxelo ezivela kwi-White House ukuba kwixa elizayo, iibhondi ziya kurhweba ngesaphulelo esikhulu se-10%.
Ngesi sizathu, ngaphandle kwento yokuba kucingelwa ukuba ulawulo lukaTrump ekuqaleni lwalunokuthanda amazwe amakhulu amakhulu, iApple ikhethe ukwenza izinto ngendlela yayo, kwaye ingathembi amanyathelo kurhulumente weRiphabhlikhi. I-Apple inyuse ezi bhiliyoni ziyi-7 yeedola ngohlobo lweebhonasi kule veki, yahlulwe yangamacandelo amathandathu, ngokwemiqathango yephepha elandlalwe namhlanje phambi kwe IKhomishini yoKhuseleko noTshintshiselwano.
iapile Uya kusebenzisa loo mali ukutyala imali kwiindleko zokusebenza, ukuhlawula ityala langaphambili kunye nokufumana iinkampani ezintsha, kunye nokujongana nokuthengwa kwakhona kwezabelo zakho.
Ukuba siyayithemba imilinganiselo uTrump afuna ukuyisebenzisa, kungekudala i-Apple izakuxhamla ngokuzisa imali kwilizwe, ukusukela iirhafu ziya kwehla ukusuka kwi-35% yangoku ukuya kwi-10%, ngokweengxelo zangaphakathi.
Ngokwahlukileyo, iiofisi zaseCupertino zilumkele kule nkalo. U-Luca Maestri ngokwakhe, usekela-Mongameli wezezimali e-Apple, uthethe kwangoko kule veki:
“Kuninzi ekusafuneka kwaziwe. Inkqubo ibonisa umthetho werhafu okhoyo kweli. Ngokucacileyo, siyakuyijonga ngokutsha imeko yethu ukuba izinto ziyatshintsha. "
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inyusa i-7 yezigidigidi kwintengiso yebhonasi ngaphambi komgaqo osondeleyo kaTrump